ဘာသာရေးဆိုင်ရာ မေးခွန်းများ နှင့် အဖြေများ (၁)
အောကျတိုဘာ ၁, ၂၀၁၆ - ၁၀:၃၆ ညနေ
News Code : 782662
မေး။ ခရစ်ယာန် ဘာသာဝင်တစ်ဦး အား မေတ္တာလက်ဆောင်အဖြစ် ကျမ်းတော်မြတ် ကုရ်အာန် ပေးခြင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး မည်သည့် ရှရီအီ အမိန့် ရှိပါသနည်း ? အကယ်၍တစ်ဦး တစ်ယောက် အနေဖြင့် ဤကဲ့သို့ လက်ဆောင်ပေးခဲ့ မိမည်ဆိုလျှင် ပြန်ပြီးတောင်းခံရ မည်လား ဆိုတာ လေး သိလိုပါတယ် ? စသည်ဖြင့် အဖိုးတန် မေးခွန်းများ နှင့် အဖြေများကို အေယက်ပါအတိုင်းလေ့လာ နိုင်မည် ဖြစ်ပါတယ်။
မေး။ ခရစ်ယာန် ဘာသာဝင်တစ်ဦး အား မေတ္တာလက်ဆောင်အဖြစ် ကျမ်းတော်မြတ် ကုရ်အာန် ပေးခြင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး မည်သည့် ရှရီအီ အမိန့် ရှိပါသနည်း ? အကယ်၍တစ်ဦး တစ်ယောက် အနေဖြင့် ဤကဲ့သို့ လက်ဆောင်ပေးခဲ့ မိမည်ဆိုလျှင် ပြန်ပြီးတောင်းခံရ မည်လား ဆိုတာ လေး သိလိုပါတယ် ?
ဖြေ ။ ။ ၎င်း သည် ဤ မေတ္တာလက်ဆောင် (ကျမ်းတော်မြတ် ကုရ်အာန်) အား အကြောင်း ပြုပြီး လမ်းမှန် သို့ ရောက်နိုင်မည်ဟု မျှော်လင့်ချက် ရှိပါက ပြဿနာမရှိချေ။ ဤကဲ့သို့ မဟုတ်ပါက ပြဿနာ ရှိပါသည်။
အေစ်သေဖ်သာ အသ်ဂျဒီးဒ် ဒေ မကာရေမ် အတွဲ (၃) ၊ စာမျက်နှာ ၆၁၄ ၊မေးခွန်းအမှတ် ၁၇၆၆
မေး။ အကယ်၍ အိမ်နီးချင်းအိမ် က သစ်သီးပင်၏ အကိုင်းများမှတဆင့် သီးနေသည့် သစ်သီးများ တန်တိုင်ကိုကျော်ပြီးကျွန်တော်တို့အိမ်ဝန်းထဲရောက်နေပါသည်။၎င်းသစ်သီးများကို စားသုံးခွင့် ရှိမရှိ ဖြေကြားပေးပါခင်ဗျား။
ဖြေ။ ။ မလွဲမသွေ ပိုင်ရှင်၏ ခွင့်ပြုချက်ရယူရပေမည်။ (ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲစားပိုင်ခွင့်မရှိချေ။)
အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆရက်ဒ် စစ်သာနီရုံး ဆိုက်ဒ်
မှတ်ချက် ။ ။ သူတပါး၏ ရပိုင်ခွင့် များ ၊ပစ္စည်းဥစ္စာများ ၊ငွေကြေးများကို မတရား၊ပိုင်ရှင်များ ၏ ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ သုံးစွဲနေသူများ သောင်ဗာပြုရန် အချိန်သင့်နေပေပြီး ။
မေး ။ အဗ်ဒွလ္လာဟ် ၊ဟဘီးဘွလ္လာဟ် စသည်ဖြင့်နာမည် မှည့်ထားသူများ ၏အမည်များကို ဝဇူမရှိဘဲရေးသားမည်၊ထိတွေ့မည်ဆိုလျှင် မည်သည့် ရှရီအီ အမိန့် ရှိပါသနည်း ? ဖြေ ။ ။ ((အလ္လာဟ်)) ဆိုသည့် အမည်တော်အား သွာဟာရသ် ( ဂူစ်လ်(သို့) ဝဇူ (သို့) သယာမွန်မ် ) မရှိဘဲ ထိတွေ့ခွင့် မရှိချေ။ အေစ်သေဖ်သာအသ် သေ အေမာမ်ခိုမေနီး အတွဲ (၁) ၊ စာမျက်နှာ ၄၈ ၊မေးခွန်းအမှတ် ၈၂
မေး။ တီဗီ ၊မိုနီတာ နှင့်မိုဘိုင်း မျက်နှာပြင်တွင် ရှိနေသည့် ကျမ်းတော်မြတ် ကုရ်အာန်၏ အာယတ်တော်များကို ဝဇူ မရှိဘဲ ထိတွေ့ ခွင့်ရှိပါသလား?
ဖြေ ။ ။ အကြောင်းမဟုတ်ချေ ။ (ပိုင်၏။)
အေစ်သေဖ်သာအသ် သေ စိုဗ်ဟာနီ စာမျက်နှာ ၅၁
မေး။ အကယ်၍ ခင်ပွန်းသည် မှ မိမိ၏ ဇနီး အား စေလာယေရဟ်မ် ( အထူးသဖြင့် မိဘနှစ် ပါး ကိုတွေ့ဆုံ ခြင်း) လုပ်ခြင်း ကို တားမြစ်မည် ဆိုလျှင် ဇနီးအတွက် မည်သည့် တာဝန် ရှိပါသ နည်း ? ခင်ပွန်းသည်၏ ခွင့်ပြုချက် မယူဘဲ မိဘနှစ်ပါး နှင့် တွေ့ရန် သွား နိုင်ပါသလား?
ဖြေ ။ ။ မရပါ။ ခင်ပွန်းသည် ၏ခွင့်ပြုချက်မရှိ ဘဲ မိဘနှစ်ပါးကို တွေ့ရန် သွားခွင့်မရှိချေ။ စေလာ ယေရဟ်မ် ဆိုသည်မှာ ၎င်းတို့ ထံ အသွားအလာ လုပ်ရန် တစ်ခုတည်း မဟုတ်ချေ။တစ်နည်း အားဖြင့် ဖုန်း၊ စာ ၎င်းကဲ့သို့အရာများ ( မေးလ်၊ချက်.... ) များကို သုံးပြီး သတင်းမေးမြန်းခြင်း၊ သတင်း ပို့ပေးခြင်းတို့လည်း ပါဝင်ပေသည်။
ညွန်း - ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ အေမာမ်ခိုမေနီ (ရ.ဟ) ၏ သဲဟ်ရီရွလ်ဝဇီလေ ကျမ်း ဒုတိယတွဲ / မဂ်ျမအွလ်မဆာအေ ဖွာဇေလ် အတွဲ ၁ ၊ မေးခွန်း အမှတ် ၁၆၃၂
မေး။ နမာဇ် မြဲသူ နမာဇ်ဇီ ဧည့်သည် အားအိမ်တွင် ဧည့်သည်အဖြစ် ရှိနေစဉ် ၎င်း၏ ခွင့်ပြုချက် မယူဘဲ နမာဇ်အတွက် နိုးထပေး နိုင်ပါသလား ?
ဖြေ ။ ။ ၎င်း ကျေနပ်မည်ဟု သိနေလျှင် အကြောင်းမဟုတ်ချေ။ (နိုးထပေးနိုင်ပါသည်။)
ညွန်း - မဂ်ျမအွလ်မဆာအေ ဂိုလ်ဗိုင်ဂါနီ အတွဲ ၁ ၊ စာမျက်နှာ ၅၂၇
မေး။ မနုဿ လူသားအနေဖြင့် မိမိ၏ ဇနီး နှင့် အရွယ်မရောက်သေးသည့် သားသမီးများ ကို နမာဇ် ဝတ်ပြုရန် အလို့ငှာ နိုးထပိုင့်ခွင် ရှိပါသလား ?
ဖြေ ။ ။ ကောင်းမြတ်သည့် လုပ်ရပ် ဖြစ်ပါသည်။ နိုးထပေးနိုင်ပါသည်။
မေး။ကဗရ်စတန်တစ်ခုတွင် မယသ်များကိုသဖ်နာထားသည်မှာ နှစ်ပေါင်း ၁၀၀ ရှိသွား ပါပြီး၊(ထိုကဗရ်များတွင်) မယသ်(အသစ်များ)ကို ဆက်ပြီး ဒဖ်နာ ခွင့် ရှိပါသလား ?
ဖြေ ။ ။ အကယ်၍ မယသ်များ၏ လက္ခအမှတ်အသားများအားလုံးပျောက်သွားပြီးဆိုလျှင် မယသ်(အသစ်များ)ကို ဆက်ပြီး ဒဖ်နာရာတွင် ပြဿနာမရှိချေ။
ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ မကာရေမ် မို ရှီးရာဇီး ၏ အေစ်သေဖ်သာ အသ်ဂျဒီးဒ် ကျမ်း ပထမတွဲ ၊မေးခွန်း အမှတ် ၉၅
ရှိက်ခ်အဗ်ဒွလ္လာဟ်ကာဒေရ် ဂေလာနီ(ဂျေလာနီ) နှင့်ပတ်သက်ပြီး ရှီအာ အေမာမ်မီယာ နှင့် အိုလမာ ယေ ရှီအာ အမြင်မည်သို့ ရှိပါသနည်း ? ခိုင်ခိုင်မာမာ ၊ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှင်းပြပေးပါ။
ဖြေ ။ ။ စလာမ် နှင့်အတူ
လေးစားအပ်ပါသော မိတ်ဆွေကြီးခင်ဗျား ....
ရှီအာ(အိုလမာ)အနေဖြင့်ဤ ပုဂ္ဂိုလ်အား အဟ်လေစွန္နသ် စူဖီတစ်ဦး ဟု မြင်ပါသည်။အခြား သီးသန့် အမြင်မရှိပါ။
အဖြေပေးသည့်ရက် ၂၄ ဧပြီ လ၂၀၁၄ခုနှစ်
ဟဇရသ်အာယာသွလ္လာဟ် ဒေါက်တာ ဆရက်ဒ် ဂဇ်ဝေနီ ၏ ကြီးကြပ်မှုအောက်ရှိ သုတေသီအဖွဲ့ / ကွမ်းမြို့
မေး ။နမာဇ် မဖတ်သူ (သို့) နမာဇ်ကို လက်မခံသည့် သူ(သို့)သူမ အတွက် ကုရ်အာန်ခွာနီ လုပ်ပိုင် ခွင့် ရှိပါသလား ?
ဖြေ ။ ။ မွတ်စလင်မ် တိုင်းအတွက်(ယုတ်စွအဆုံး) မည်မျှပင် အပြစ် ဂိုနာရှိသူ ပင် ဖြစ်နေပါစေ (မြတ် အလ္လာဟ်ထံတော်တွင် ၎င်းတို့အား) ခွင့်လွတ် ပလပ်ပေးဖို့၊ ခွင့်လွတ်သနားပေးဖို့ တောင်းခံ ပေးခြင်း ၊၎င်းတို့ အတွက် ကောင်းမှု ကုသိုလ်များ ပြုလုပ်ပေးခြင်း သည် ပြုလုပ်ပိုင်ခွင့် ရှိပါသည်။ (ကုရ်အာန်ခွာနီပြုလုပ်ပေး နိုင်ပါသည်။
ညွန်း - ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ မကာရေမ် မို ရှီးရာဇီး ၏ အေစ်သေဖ်သာ အသ်ဂျဒီးဒ် ကျမ်း စာမျက်နှာ ၅၁၃ ၊မေးခွန်း အမှတ် ၁၆၇၉
ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ သဗ်ရေဇီး (ရ.ဟ)၏ အေစ်သေဖ်သာအသ်ဂျဒီးဒ် ကျမ်း စာမျက်နှာ ၄၄၂ ၊မေးခွန်းအမှတ် ၁၉၃၆
မေး ။တအားဟောင်းနွမ်း သွားပြီး ဖတ်ရွတ်ရန် ခက်ခဲသွားသည့် ကျမ်းတော်မြတ် ကုရ်အာန် များကို တွင်းတူးပြီးမြေကြီးထဲ ဒဖ်နာရမည်လား(သို့) မီးရှို့ ရမည်လော?
ဖြေ ။ ။ သန့်ရှင်းသန့်ပြန့် သည်ပြီး မရိုမသေ၊မလေးမလေးစားလုပ်ရန်၊စော်ကားရန် မဖြစ်စေ မည့် နေရာတွင် (တွင်းတူး) ဒဖ်နာရပါမည်။ ကျမ်းတော်မြတ် ကုရ်အာန် အား မီးရှို့ ခြင်း သည် ဟရာမ် ဖြစ် ပါသည်။
ညွန်း - ဟဇရတ်(သ) အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ စာဖီ ဂိုလ်ဗိုင်ဂန်နီ ၏ ((ဂျာမေအ် အိုလ် အဲဟ်ကာမ် ကျမ်း အတွဲ ၁ ၊စာမျက်နှာ ၅၇
မေး ။ ကျမ်းတော်မြတ် ကုရ်အာန်၏ အာယတ်တော်များကို ကျောင်းသင်ပုန်းပေါ်တွင် မြေဖြူဖြင့် ရေးသား အသုံးပြုပြီးနောက် ပြန်ဖျက်ချိန်တွင် ယေဘုယျအားဖြင့် ဖြေဖြူ မှုန့် များ အောက်သို့ကျလေ၏ ။ ထို အမှုန့်များကို ဝဇူမရှိဘဲ ကိုင်လို ရပါသလား ?
ဖြေ ။ ။ ဟရာမ် မဟုတ်ပါ ။
ညွန်း - အာဒါဗ်ဝါအဲဟ်ကာမ် မေ ကုရ်အာန်(မဟ်မူဒ်အက္က်ဘရ်) စာမျက်နှာ၃၈
မေး ။ မတော်တဆ မနုဿ လူသား၏ လက်ထဲ မှ ကျမ်းတော်မြတ် ကုရ်အာန်မြေပြင်ပေါ်သို့ ပြုတ်ကျခဲ့မည် ဆိုလျှင် မည်သည့်တာဝန် ရှိပါသနည်း၊ကဖာရာ(ရှရီအီဒဏ်) ရှိပါသလား ?
ဖြေ ။ ။ ကဖာရာ(ရှရီအီဒဏ်) မရှိပါ။ သို့သော် မလွဲမသွေ ချက်ချင်း ပြန်ကောက်ယူခြင်း၊အရိုအသေ ပေးခြင်း (နမ်းခြင်း၊ခေါင်းပေါ်တင်ခြင်း)ကို ပြုရပေမည်။
ညွန်း - ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ မကာရေမ် မို ရှီးရာဇီး ၏ အေစ်သေဖ်သာ အသ်ဂျဒီးဒ် ကျမ်း အတွဲ ၁၊စာမျက်နှာ ၅၂၁
ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ သဗ်ရေဇီး (ရ.ဟ)၏ အေစ်သေဖ်သာအသ်ဂျဒီးဒ် ကျမ်း အတွဲ ၁၊စာမျက်နှာ ၄၄၅
မေး ။ကျမ်းတော်မြတ် ကုရ်အာန် ဖတ်ရွတ်နေချိန် ခြေများကို ဆင်း၍ ဖတ်ရွတ်ခြင်းသည် မရိုမသေ၊မလေးမစားပြုခြင်းမည်ပါသလား?
ဖြေ ။ ။အကယ်၍ မရိုမသေ၊မလေး မစားပြုသည့်ရည်ရွယ်ချက် မပါက ဟရာမ် မဟုတ်ချေ။ သို့သော်
အခြေအနေတိုင်း (အရေးကြီးအချိန် (အခက်အခဲရှိချိန်) မှအပ)ဤကဲ့သို့ ခြေဆင်း၍ ဖတ်ခြင်းကို
ညွန်း - ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ သဗ်ရေဇီး (ရ.ဟ)၏ အေစ်သေဖ်သာအသ်ဂျဒီးဒ် ကျမ်း အတွဲ ၁၊စာမျက်နှာ ၁၆၄၇
မေး ။ အကီးက်လက်စွပ် အပေါ် (သို့) ရင်ဆွဲ (ဆွဲကြိုး) အပေါ် မြင့်မြတ်သည်နာမတော်များ (အလ္လာဟ်၊ရစူလ်၊နဘီများ(အ.စ)အားလုံး၊ကိုယ်တော်မြတ်(ဆွ)၊ အေမာမ်၁၂ပါး (အ.စ)၊ ဟဇရသ် ဇဲဟ်ရာ (စ.အ) ၏နာမတော်များ ) သို့မဟုတ် ကျမ်းတော်မြတ် ကုရ်အာန်၏ အာယတ်တော်များ ရေး ထားမည်။၎င်းအရာများ ကို ဝတ်ပြီး အိမ်သာ တက်ချိန် ဝတ်ခွင့် ရှိပါသလား ? ဖြေ ။ ။ အကယ်၍ မရိုမသေပြုသလို၊မလေးမစားပြုသလို မဖြစ်မည်၊ဝဇူမရှိဘဲ(နာမတော်များကို) မထိမည်ဆိုလျှင် ပြဿနာ မဟုတ်ချေ။ ညွန်း - အာဒါဗ်ဝါအဲဟ်ကာမ် မေ ကုရ်အာန်(မဟ်မူဒ်အက္က်ဘရ်) စာမျက်နှာ၃၅
မေး မိုမင်(သို့) မိုမေနာ တစ်ဦးဦးအား စွပ်စွဲမှု အတွက် မဟာတမန်တော်မြတ်ကြီး (ဆွ) ဘာများ မိန့်တော်မူထားပါသလဲခင်ဗျား ?
ဖြေ ။ ။ဟုတ်ကဲ့မိန့်တော်မူထားပါတယ်။ မဟာတမန်တော်မြတ်ကြီး မိုဟမ္မဒ် (ဆွ) မိန့်တော်မူသည်မှာ -
((အကြင်မည်သူမဆို ၊မိုမင်အမျိုးသား(သို့) အမျိုးမီးအား ၎င်း(မပြော၊မလုပ်)သည့်အရာဖက်သို့ (လုပ်သည်၊ပြောသည်)ဟု စွပ်စွဲပြောဆိုမည်ဆိုလျှင်အလ္လာဟ် ဟိုအရှင်မြတ် သခင်သည် ကေယာမသ် နေ့ တွင်၎င်းးအားမိမိစွပ်စွဲထားခဲ့သည့် စွပ်စွဲ ချက်အပေါ်အဖြေပေးရန် မီးတောင်ပူစာ ပေါ်တွင်တင် ထားတောမူပေမည်။))
ညွန်း - ဘေဟာကျမ်း အတွဲ ၇၅ ၊ အခန်း ၆၂ ၊ဟဒီးစ်တော် အမှတ် ၆
မေး ။ သိက္ခာမဲ့သည့်အဆဲ၊ဆဲဆိုသူများအတွက် ဂျန္နသ်(အမတသုခဘုံ) သည်ဟရာမ် ဖြစ်သည်ဆို သည်မှာ မှန်ကန်ပါသလား ?
ဖြေ ။ ။ဟုတ်ကဲ့ ၊ မှန်ကန်ပါသည်။ ဟဇရသ်အာယာသွလ္လာဟ်ဆရက်ဒ် အဗ်ဒွလ် ဟိုစိုင်း(န) ဒက်စ်ဒဂိုဗ်(ရ.ဟ) (အေမာမ်ဂျိုမာရှီးရာဇီးမြို့ ) ရေးသားသီးကုံးထားသည့် ((ဂိုနာဟာယေဂဗီးရာဟ်)) ကျမ်း၏ ဆဲရေး တိုင်းထွာ ခြင်းကဏ္ဍတွင် အတိအကျ လေ့လာနိုင်ပါသည်။ ထိုပြင် အူစူလေကာဖီကျမ်း အတွဲ ၂ ၊စာမျက်နှာ ၃၂၃ တွင်လည်း ကိုယ်တော်မြတ် (ဆွ)ဟဒီးစ်တော်အား လေ့လာ နိုင်ပါသည်။
ဖြေ ။ ။မရှိချေ။
ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆရက်ဒ်အလီခါမေနာအီး
ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ နူးရီဟမ်ဒါနီ
ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဗဲဟ်ဂျသ် (ရ.ဟ)
ကြည့် - ရေစာလေအေစ်သေဖာသာအာသ် သေ ဂျဒီးသ် မရာဂျေသက္က်လီးဒ် ကျမ်း - ပြုစုသူ - ဟွဂ်ျဂျသွလ်အစ္စလာမ် လသွီးဖ်ရာရှေဒီ စာမျက်နှာ၅၈
မေး ။ အဟ်လေ့ဘိုက် (အ.စ) အား သတ်ဖြတ်ခဲ့သူများ၊ နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်း နေသူများ အပေါ် အမြဲတန်းလအ်နသ်ပို့ခွင့်ရှိရှိပါသလား ?
ဖြေ ။ ။ ရှိပါသည်။ ထိုပြင် အဟ်လေ့ဘိုက် (အ.စ) အား သတ်ဖြတ်ခဲ့သူများ၊ နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်း နေသူများ အပေါ် အမြဲတန်းလအ်နသ်ပို့သခြင်းသည် မိုစ်သဟဗ် ဖြစ်ကြောင်း အလာမာ မိုဟမ္မဒ်အလီ ကေရ်မာန်ရှာဟီး (ရ.ဟ) ရေးသားထားသည့် (مقامع الفضل) ကျမ်း၏မေးခွန်း အမှတ် ၅၆၁ တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။
မေး ။နာမဟ်ရမ် အမျိုးသမီးများ (မိန်းကလေးများ ) အနေဖြင့် မင်္ဂလာဆောင်ပွဲများ၊ထိုနည်းတူ ပွဲများ တွင် ကိုယ်လုံး ကိုယ်ထည်ကို ပေါ်စေသည့်အဝတ်အထည်များ ၊ဟိုပေါ် ဒီပေါ် အဝတ်အထည်များကို ဝတ်ခွင့်ရှိ ပါသလား ?
ဖြေ ။ ။ အကယ်၍ တစိမ်းယောက်ကျားလေးများ၏ ကြည့်ခြင်း မှ လုံခြုံမည်၊ စာရိတ္တကိုဖောက်ပြန်စေမှု (ကာမရာဂကိုထကြွစေမှု) မှ လုံခြုံ စိတ်ချရမည်ဆိုလျှင် ဝတ်နိုင်ပေသည်။ ဤကဲ့သို့ မဟုတ်လျှင် ဝတ်ပိုင်ခွင့် မရှိချေ။
ကြည့် - ရေစာလေအေစ်သေဖာသာအာသ် သေ ဂျဒီးသ် မရာဂျေသက္က်လီးဒ် ကျမ်း - ပြုစုသူ - ဟွဂ်ျဂျသွလ်အစ္စလာမ် လသွီးဖ်ရာရှေဒီ စာမျက်နှာ၂၈၅
မေး ။နာမဟ်ရမ် အမျိုးသမီးများ (မိန်းကလေးများ ) နှင့် လက်ဆွဲ နှုတ်ဆက်ခွင့် ရှိပါသလား ?
ဖြေ ။ ။ ကာမရာဂ စိတ် ၊တဏှာ စိတ် ပါသည်ဖြစ်စေ ၊မပါသည်ဖြစ်စေ ဟရမ် ဖြစ်ပေသည်။
ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆရက်ဒ်စစ်သာနီ ၊ ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဗဲဟ်ဂျသ် (ရ.ဟ) ၊ ၊ ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ မကာရေမ်မို ရှီးရာဇီး၊ ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆရက်ဒ်အေမာမ်ခိုမေနီ (ရ.ဟ) ၊ ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ နူးရီဟမ်ဒါနီ ၊ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဖွာဇေလ်လန်ကရာနီ (ရ.ဟ)
မေး ။ မာန်၊ မာနမဲ့ ကျိုးနွံ့ စွာနေခြင်း၏ လက္ခဏာ ကို ဖော်ပြပေးပါ။ ?
ဖြေ ။ ။ မာန်၊ မာနမဲ့ ကျိုးနွံ့ စွာနေခြင်း၏ လက္ခဏာမှဟဒီးစ်တော် အရ (၄) ခု ရှိပါသည်။
(၁) ထိုင်ဝိုင်းတွင် အားလုံးနောက်မှာ ထိုင်ရခြင်းကို ကျေနပ်ခြင်း
(၂)မည်သူနှင့်ပင်တွေ့တွေ့ ဦးစွာ စလာမ် စ ပေးခြင်း
(၃) မှန်နေသည့်တိုင်အောင် ရန်ဖြစ်မှု ကို ရှောင့်ကြဉ်ခြင်း
(၄)မိမိ၏သီလ၊သမာဓိကို ချီးမွမ်းသည်ကို မနှစ်သက် ခြင်း တို့ ဖြစ်ပါသည်။
ကြည့် - စဖီးနသိုလ်ဗေဟာရ် ကျမ်း
လက်ဆောင်ပေးခြင်းသည်ကောင်းမြတ်သည့် အလုပ် ဖြစ်ပါသလား ?
ဖြေ ။ ။ ဖြစ်ပါသည်။ အကြောင်းမှာ အကြင်မသည်သူမဆို အရာတစ်ခုခု ကို ရင်းနှီးအကျွမ်းဝင်မှု ကို တိုးမြှင့်ရန် အလိုငှမိမိ၏ဆင်းရဲသသည့်မိုမင်ကို ဖြစ်စေ ချမ်းသာ သည့် မိုမင်ကို ဖြစ်စေ ပေးဆောင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။အကယ်၍ မြတ်အလ္လာဟ် နှစ်မြို့ မှု အတွက်ဆိုသည့်နီယသ် နှင့်ပေးလျှင် အမြင့်မြတ်တကာ အမြင့်မြတ်ဆုံး အေဗာဒသ်များမှ အေဗာဒသ် တစ်ခု ကို ပြုခြင်းမည်လေ၏။
ကြည့် - အာယာသွလ္လာဟ် ရှဟီးဒ် ဒက်စ်သဂိုင်ဗ်ရှီးရာဇီး (ရ.ဟ) ၏ဂိုနာဟာယေကဗီးရဟ်ကျမ်း
အမီးရွလ်မိုမေနီဟဇရသ် အလီ (အ.စ) မိန့်တော်မူလေသည်။
((အကယ်၍ကျွန်ုပ်အနေဖြင့် မိမိ မိုမင်ဘိုင်ကို လက်ဆောင်အဖြစ် အရာတစ်ခုခုပေးဆောင်ရခြင်းကို ဆဒ်ကာပေးရခြင်းများစွာ နှစ်သက်ပေသည်။ ))
ကြည့် - ကာဖီကျမ်း အတွဲ၅ စာမျက်နှာ၁၄၄
မေး ။ကျွန်တော်တို့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ကိုယ်ထမင်းကို စားပြီး စကားအပေးအယူ ပြုတဲ့သူတွေ ရှိပါတယ် ...သူတို့ကို ရှရီအသ် တရားတော်အရ မည်ကဲ့သို့ ဆက်ဆံရည်နည်း?
ဖြေ ။ ။ ၎င်းတို့ကို ဆက်ဆံရန် အိုလမာယေ ရှီအာ အနေဖြင့်နည်းလမ်းများမိန့်ကြား၊ရေးသားထား ပါသည်။ဤနေရာတွင်ကျွန်တော်အနေဖြင့် အီရန်နိုင်ငံ ရှိသာသနာ့ပညာရှင်များက သင်ရိုးညွန်းတန်း အဖြစ်သီးကုံးထားသည့် (အာဒါဗ်ဗေအစ္စလာမ်မီ ကျမ်း )အတွဲ (၁) မှအချို့ အချက်ကို ကောက် နှုတ်ဖော်ပြပါမည်။
(၁)၎င်းသည်ရရှီအသ်အမြင်အရဖာစေက်ဖြစ်ရာ သူ၏စကားကိုအသေအချာမလေ့လာဘဲ လက်မခံ သင်ချေ။
(၄)ကုန်းတိုက်ကုန်းချော၊စကားအပေးအယူလုပ်သည်ဆိုသည်မှာတရားတော်အရ တစ်ဦး တစ်ယောက်ကပြောလိုက်သည့် မကောင်းသည့်စကား၊မကောင်းသည့်အတွေးကို (အပြောခံ ရသူ(သို့)အခြား သူတစ်ပါးထံ) သတင်းပို့ခြင်းကို ခေါ်ဆိုကြောင်း သိထားရမည်။ (ဤကဲ့သို့သော်သူများနှင့်ရှောင်ကြဉ်ရမည်။)
(၅) ကုန်းတိုက်ကုန်းချောသူပြောသည့်စကားမှန်းသိလျှင် သူပြောတဲ့သူထံတွင်သူပြောသည့်အတိုင်း ဟုတ်မဟုတ် စိစစ်လေ့လာ ဖို့မလိုချေ။
မေး ။ရှိင်တွာန်အနေဖြင့် လူသားတွေအပေါ်လုပ်သည့် သံသယ၊ဇဝေဇဝါဘယ်နှစ်မျိုး ရှိပါသနည်း ?
ဖြေ ။ ။ သုံးနည်း ရှိပါသည်။
(၁) အတွေးအခေါ်အယူအဆ တွင် သံသယ၊ဇဝေဇဝါဖြစ်အောင်ပြုခြင်း (သာဓက အားဖြင့် ကိုယ်နားမလည်သည့် ဘာသာရေးကိစ္စများ၊အကီဒါများတွင် သက်ဆိုင်ရာအိုလမာကိုမမေးမမြန်းဘဲ ကိုယ်ပိုင် အတွေးချဲ့ ပြီး ထင်ရာမြင်ရာ အဖြေထုတ်ခြင်း စသည်ဖြင့်)
(၂) လက်တွေလုပ်ဆောင်မှု တွင် သံသယ၊ဇဝေဇဝါဖြစ်အောင်ပြုခြင်း (သာဓက အားဖြင့် အပေါ့အလေးသွားပြီးလျှင် ရေများများ အသုံးပြုလျက်နှင့် အမှန်တကယ် သန့်စင်သွားပြီးလား ၊မသန့်စင်သေးဘူးလား ဟုဒွဟဝင်ခြင်း စသည်ဖြင့်)
(၃) လူမှုပေါင်းသင်းဆက်ဆံရ တွင် သံသယ၊ဇဝေဇဝါဖြစ်အောင်ပြုခြင်း (သာဓက အားဖြင့် ကိုယ်အသေအချာ မသိဘဲ လူတစ်ယောက်က အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကို ကြည့်နေတာမြင်လျင် အသေအချာမစိစစ် တော့ဘဲ စွပ်စွဲပုတ်ခေတ်ခြင်း၊ စသည်ဖြင့်)
ဟွဂ်ျဂျသွလ်အစ္စလာမ် ဒေါက်တာ ရဖီးအီး ဟောကြားထားသည့် ((دام های شیطان )) အမည်ဖြင့် ဝါဇ်မှ ကောက်နှုတ် တင်ပြလိုက်ရပါသည်။
မေး ။ အေမာမ်ဟိုစိုင်း(န) (အ.စ) သခင်ကို ကရ်ဗလာမသွားရန် အေမာမ်(အ.စ)အားမေတ္တာ ရပ်ခံခဲ့သည့်အုပ်စုများကို မည်ကဲ့သို့ ခွဲခြားနိုင်ပါသနည်း?
ဖြေ ။ ။ ။ အေမာမ်ဟိုစိုင်း(န) (အ.စ) သခင်ကို ကရ်ဗလာမသွားရန် အေမာမ်(အ.စ)အားမေတ္တာ ရပ်ခံခဲ့သည့်အုပ်စုများကို အောက်ပါအတိုင်းအုပ်စု (၃)ခု အဖြစ်ခွဲခြားနိုင်ပါသည်။
ပထမအုပ်စု ။ ။ အချစ်မေတ္တာကြောင့် ဥပမာ ဟဇရသ်အွမ်မေစလ်မာ(ရ.သွေ့)သခင်မ…
ဒုတိယအုပ်စု ။ ။ နိုင်ငံရေးအရ ဥပမာ ဟဇရသ်အဗ်သွလ္လာဟ်အဗ်နေအုမရ် …
တတိယအုပ်စု ။ ။ အထောက်အထားသက်သေများပြ၍ ဥပမာ ဟဇရသ်ဂျာဗေရ်အဗ်နေအဗ်ဒွလ္လာဟ် အန်ဆွာရီ (ရ.သွေ့) …
၁၂၊၁၂၊၂၀၁၃ တွင်ထုတ်လွှင့်ခဲ့သည်ရေဒီယိုရေကွမ်း၏ ဟွဂ်ျဂျသွလ်အစ္စလာမ် ဒေါက်တာ ရဖီးအီး ၏တရားဟောပွဲမှ ကောက်နှုတ် တင်ပြလိုက်ရပါသည်။
မေး ။ အေမာမ်ဇမန် (အ.ဂျ) အနေဖြင့် မိမိ၏ရှီအာများထံ မှဘာအလိုရှိပါသလားဆိုတာ သိပါရစေခင်ဗျား ?
အေမာမ်ဇမန် (အ.ဂျ) အနေဖြင့် မိမိ၏ရှီအာများထံ မှ အလိုရှိသည်မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ် ပေသည်။
၁။ အိုလမာ(မရ်ဂျာသက်္ကလီးဒ်များ) နှင့်သာသနာပညာတတ်ကျွမ်းသူများ(အာလင်မ်များ) နှင့် အဆက်အသွယ်ရှိနေရန်
၂။ နမာဇ်များကို ၎င်းနမာဇ်များ၏အချိန် အတွင်း ပထမဆုံးအချိန်၌်ဖတ်ရန်
၃ ။ လူသားများ၏ ရပိုင်ခွင့်များကို ဂရုပြုတာဝန်ကျေရန်
၄။( အမြန်ဆုံး )ကိုယ်တော်(အ.ဂျ) ဖူးပွင့်ရန်အတွက်ဒိုအာ ပြုရန် တို့ဖြစ်ပါသည်။
ညွန်း - ဗေဟာကျမ်း အတွဲ ၅၃ ၊စာမျက်နှာ ၁၈၀ ၊ဟဒီးစ်တော်အမှတ် ၁၀
ရှိက်ခ်စူသူက်(ရ.ဟ)၏ ကမာလွဒ်ဒီးန်ကျမ်း အတွဲ ၂ ၊စာမျက်နှာ ၄၈၅ ၊ဟဒီးစ်တော်အမှတ် ၄
မေး ။ နောက်ဆုံးခေတ်ကာလ ရောက်လာချိန်တွင် သားသမီးများအနေဖြင့်မိမိတို့၏မိဘ နှစ်ပါးကိုဆက်ဆံပုံလေးကို သိပါရစေ.. ?
ဖြေ ။ နောက်ဆုံးခေတ်ကာလ ရောက်လာချိန်တွင် သားသမီးများအနေဖြင့်မိမိတို့၏မိဘ နှစ်ပါးကို ဆက်ဆံ ပုံလေးနှင့် ပတ်သက်ပြီး တင်ပြရမည်ဆိုလျှင် ကိုယ်တော်မြတ်ကြီး ဟဇရသ် မိုဟမ္မဒ် (ဆွ) မိန့်တော်မူထားပါသည်။
(( (ထိုခေတ်အချိန်အခါ တွင် )လူသားအနေဖြင့်မိမိတို့မိဘ နှစ်ပါးအပေါ် ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက် ၊ရက်စက်ကြ ပေမည်သို့သော်မိမိတို့၏ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများအပေါ်အချစ်မေတ္တာ ထားပြီးကောင်းမွန်စွာ ဆက် ဆံကြ ပေမည်။ ))
ညွန်း - ဖရ်ဟန်က်ကေမရ်သွမ် မေဒွန်ယာ ကဗ်အဇ် ဇဟူရ် စာမျက်နှာ ၄၅
၂၉၅ ။ ။ မေး ။ နောက်ဆုံးခေတ်ကာလ ရောက်လာချိန်တွင် ရိုသေလေးစားမှုဂါရဝတရား နှင့် ပတ်သက်ပြီး သိပါစေခင်ဗျား ?
ဖြေ ။ ။ နောက်ဆုံးခေတ်ကာလ ရောက်လာချိန်တွင် ရိုသေးလေးစားမှုဂါရဝတရား နှင့် ပတ်သက်ပြီး တင်ပြရမည်ဆိုလျှင် ကိုယ်တော်မြတ်ကြီး ဟဇရသ် မိုဟမ္မဒ် (ဆွ)မိန့်တော်မူထားပါသည်။
((ထိုခေတ်အချိန်အခါ တွင် ကလေးငယ်များအပေါ် သနားကြင်နာ ယုယကြမည်မဟုတ်၊လူကြီးများ ကိုလည်းရိုသေလေးစားဂါရဝပြုကြမည်မဟုတ်ချေ။ ))
ညွန်း - ဖရ်ဟန်က်ကေမရ်သွမ် မေဒွန်ယာ ကဗ်အဇ် ဇဟူရ် စာမျက်နှာ ၄၇၊၄၈
မေး ။ အေမာမ်ဇမန် (အ.ဂျ) ၏ဟူကူးက် (ရပိုင်ခွင့်များ) နှင့်ပတ်သက်ပြီး ကျွန်တော်တို့ ရှီိအာများပေးဆပ် ရမည့်တာဝန်ဝတ္တရား ရှိပါသလား?
ဖြေ။။ရှိပါသည် ။ဒိုအာယေ နိုသ်ဗာ တွင် တောင်းဆိုထားပါသည်။ ဒိုအာ၏ဆိုလိုချက်ကတော့
((အိုအလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်သခင် … ကျွန်တော်မျိုးတို့ကို အေမာမ်ဇမန် (အ.ဂျ) ၏ဟူကူးက် (ရပိုင်ခွင့် များ) ပေးဆပ်ထမ်းဆောင်တာဝန်ကျေနိုင်ရာရောက်ရန်အလိုငှ ကိုယ်တော်(အ.ဂျ)၏အမိန့်များ လိုက် နာ ကျင့်သုံး နိုင်ရန် ကြိုးစားမှုစွမ်းအား နှင့် ကိုယ်တော်(အ.ဂျ) ၏ အမိန့်များကို မသွေးဖီ၊ မဆန်ကျင့် ရန် စွမ်းအားပေး သနား တော်မူပါ။)) ဟူ၍ဖြစ်ပါသည်။
အေမာမ်(အ.ဂျ) ၏ဟူကူးက် (ရပိုင်ခွင့်များ) နှင့်ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ ရှီိအာများပေးဆပ် ရမည့် တာဝန်ဝတ္တရားမှာ နှစ်မျိုးနှစ်စားရှိပါသည်။ပထမအမျိုးအစားမှာ ဝါဂျစ်ဗ် မပြုမနေတာဝန်ဝတ္တရား ဖြစ်ပြီး ၊ဒုတိယ အမျိုးအစားမှာ မိုစ်သဟဗ် (ပြုလျှင်ပြုကောင်းသည်) ဟူ၍ဖြစ်ပါသည်။
ညွန်း - အဟ်ကာမ်မေမွန်သဇေရာန်ကျမ်း ၊စာမျက်နှာ ၁၇
မေး ။ အေမာမ်ဇမန် (အ.ဂျ) ဖူးပွင့်ဖို့ အဘယ်ကြောင့် ကြာနေရပါသနည်း?
ဖြေ ။ ။ အေမာမ်ဇမန် (အ.ဂျ) ကိုယ်တော်တိုင် မိန့်တော်မူသည်။
(( အသင်တို့၏ ဂိုနာအပြစ်တစ်ခု သည် ကျွန်ုပ် ဖူးပွင့်ဖို့ ရက် (၄၀) ကို ကြံကြာစေလေသည်။))
ကြည့် - ကေသာဗ် ဗိုလ်ကာအေမ် (အ.စ) ကျမ်း စာမျက်နှာ ၂၅၀
မေး ။ သူငယ်ချင်း စိတ်ဓာတ် ဆိုတာ ဘယ်လိုလဲ ဆိုတာ ကို သိပါရစေခင်ဗျား …
ဖြေ ။ ။ အေမာမ်ဂျအ်ဖရ်ဆွာဒစ် (အ.စ) မိန့်တော်မူသည်။
(( သူငယ်ချင်းစိတ်ဓာတ် ၏ နယ်နိမိတ်မှာဤသို့ဖြစ်ချေသည်။ အသင်၏ သူငယ်ချင်း(အစစ်)သည် အသင်၏ဂုဏ်သိက္ခာ ကို မိမိဂုဏ်သိက္ခာ အဖြစ် ခံယူပြီး အသင်၏ ချို့ယွင်းချက် ကို မိမိ ၏ ချို့ယွင်းချက် ဟု ခံယူလေသည်။ ))
ကြည့် - အလ်ကာဖီ ကျမ်း အတွဲ ၂ စာမျက်နှာ ၆၃၉
မေး ။ အကယ်၍ မည်သည့် ခင်ပွန်းသည်မဆို မိမိ၏ဇနီးသည် အား သာသနာ့ နှင့်ရှရီအီ အလုပ်များကို စွဲစွဲမြဲမြဲ ပြုရန် မပြုနိုင်လျှင် ဖာစေက် (သာသနာ့စည်းမျဉ်းများကို ဖောက်ပျက်သူ) စရင်းဝင်သွားပါသလား?
ဖြေ ။ ။ အကယ်၍ နဟီးအဇ်မွန်ကရ် (မကောင်းရာကိုတားမြစ်ခြင်း) ပြုနိုင်လျက်မပြုခဲ့လျှင်ဖာစေက် ဖြစ် ပေသည်။
ဟဇရတ် အာယာသွလ်လ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာအလ်ဟဂ်ျနာစေရ်မကာရေမ်မိုရှီးရာဇီး (ကွမ်း)
မေး ။ ။ တစ်ချို့ဘာသာရေး လုပ်သူတွေ ကို တွေ့ရပါတယ် ...ဥပမာ နိုင်ငံတကာ ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန် ပြပွဲစသည်ဖြင့်... မြန်မာ ရှီအာများထုတ်ဝေခဲ့သည့် စာအုပ်စာတန်းတွေ နိုင်ငံတကာက ကြည့်ရှု နိုင်ရန် ခင်းကျင်းပြသရပါတယ်... ဒါပေမဲ့ တစ်ချို့ စာအုပ်တွေ ကို ဥပမာ msm စာစောင် ၊နောက်အချို့ မောင်လာနာ များ၏ ဘာသာပြန်စာအုပ်များ ၊ အရင်ကထွက်ဝေခဲ့သည့် စာစောင်၊စာအုပ်များကို မခင်းကျင်းမပြထားပါဘူး… ဘာကြောင့်ပါလဲခင်ဗျား …?
ဖြေ ။ ။ ရှင်းပါတယ် … အချက် (၃)ခုမှ တစ်ခုခု ကြောင့်ပါ….(သို့မဟုတ်) ၂ခု ကြောင့် (သို့မဟုတ်) ၃ခုစလုံးကြောင့်ပါ။ ပိုပြီးအတိအကျတော့ မြတ်အလ္လာဟ်နှင့် ပြုလုပ်သူ အသိဆုံးပါဘဲ…
(၂) စာအုပ်၊စာစောင်ရှားပါး၍ မရနိုင်တော့သည့်အတွက်ကြောင့် နှင့် ရှိသော်လည်း အဝေးရောက်နေသည့်အတွက်ကြောင့်
(၃) မနာလိုဝန်တိုပြီး ၊ပုဂ္ဂိုလ်ရေး၊လူမှုရေးအစွဲကြောင့်
မေး ။ ။ အကြင်မည်သူမဆို လိမ်၍ ၊မုသားဆို၍ ကဆမ်စားမည် ပြီးနောက် ရှက်ပြီး (နောင်တ) ရမည်ဆိုဆိုလျှင် ၎င်းအတွက် မည်သည့်တာဝန် ရှိပါသနည်း ?
ဖြေ ။ ။ ၎င်းအနေဖြင့်သောင်ဗာ ပြုလုပ်ရပေမည်၊ပြီးနောက် ဤကဲ့သို့သော် မကောင်းမှုများကို ချေဖျက် နိုင်ရန်(အစားထိုးနိုင်ရန်) အလိုငှာ ကောင်းမြတ်သည့် အလုပ်များကို ပြုလုပ်ရပေမည်။
မေး ။ မှတ်သားစရာ စကားလေးတစ်ခုလောက် သိပါရစေခင်ဗျား …?
ဖြေ။ ။ မှတ်သားစရာ ကတော့ အများကြီးပါ။ လတ်တလောအတွက်အကောင်းဆုံးစကားကလေး တစ်ခွန်းကတော့ အီရတ်နိုင်ငံနဂျဖ်မြို့မှာ ၈ နှစ်ကျော် ပညာသင်ယူနေတဲ့ ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေများမှ တစ်ဦး ဖြစ်တဲ့ ဟွဂ်ျဂျသွလ်အစ္စလာမ် မောင်လာနာ ဆရက်ဒ် မိုဒရ်စေရ် (အိန္ဒိယ) ၏ စကား လေး တစ်ခွန်းပါ။ ဒါလဲ့သူအနေဖြင့် မောင်လာအလီ (အ.စ) ၏ သြဝါဒတော် တစ်ခုကို တင်ပြထားတာပါ။ ထိုသြဝါဒကတော့ (( လောက၌အကောင်းတကာအကောင်းဆုံးသူမှာ ၎င်း အတွက် လူတွေ ငိုကြသူဖြစ်ပြီး လောက၌အဆိုးတကာအဆိုး ဆုံးသူမှာ ၎င်း ကြောင့် လူတွေငိုရသူ ဖြစ်ပါသည် … )) ဟုဖြစ်လေသည်။
ဖြေ ။ ။ (( အကြင်မည်သူမဆို ထမင်းစားပွဲမှ ကျသည့် အရာ(ထမင်း၊စားစရာများ) ကောက်၍ စား မည်ဆိုလျှင်၎င်း၏ သားသမီးများသည် လှပ၊ချောမောပြီး တောင်းတမှုမှ ကင်းကြမည်ဖြစ်ပေသည်။((
မဟာတမန်တော်မြတ်ကြီး (ဆွ) / ညွှန်း - مدارج النّبوة
ဤအတွက်ကြောင့် အထက်ပါ ဟဒီးစ်တော်ကို ရှုစားပြီး အကျိုးအမြတ် ကိုရှင်းလင်းစွာသိနိုင်ပေသည်။
မေး ။ အို အမာရ် … အသင်အားဇွာလင်မ် နှင့် သူပုန် အုပ်စုမှသတ်ဖြတ်လိမ့်မည်ဟု မဟာတမန်တော်မြတ်ကြီ(ဆွ) မိန့်တော်မူခဲ့တာမှန်ပါသလား?
ဖြေ ။ ။ ဟုတ်ကဲ့ မှန်ပါသည်။ ဤဟဒီးစ်တော်သည် ဟဒီးစ်တော်များဆိုင်ရာ ပညာရပ်အရ(မိုသာဝါသေရ်) အဆင့်အဖြစ်လာရှိတော်မူပြီး၊ ဆွာဟာဗာသာဝကတော်ပေါင်း ၃၄ပါးမှ ဆင့်ဆိုခဲ့ကြပါသည်။
ညွှန်း - الخصائص الكبرى، ج 2، ص 140
မေး ။ အစ္စလာမ်အတွက် အန္တရာယ်ကျရောက်လာချိန်တွင် မိဘ နှစ်ပါး၏ခွင့်ပြုခြင်းမယူ ဘဲ ကာကွယ်ရန် ထရပ်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး လူကြီးမင်း မည်သည့် ဟွက်မ် ရှိပါသနည်း ?
ဖြေ ။ ။အစ္စလာမ်နှင့်မွတ်စလာမ်များကိုကာကွယ်ပေးရမည်မှာဝါဂျစ်ဗ်မလုပ်မနေရဖြစ်ပေသည်။ ဤလုပ်ရပ်အတွက် မိဘ နှစ်ပါး ထံမှာခွင့်ပြုချက်ယူဖို့မလိုအပ်ချေ။သို့သော်တတ်နိုင်သလောက် မိဘနှစ်ပါး ကျေနပ် ၊သဘောတူ ခွင့်ပြုလာအောင် ကြိုးစား ရပေမည်။
ဟဇရတ်(သ) အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆရက်ဒ် အလီ ခါမေနာအီ ၏ ဆိုက်ဒ် (အူရ်ဒူ ) ကဏ္ဍ အေစ်သေဖ်သာအ် မှ
မေး ။ အချို့ ဆိုက်ဒ် နှင့်အင်တာနက် သတင်းဌာနများတွင် ကိုယ်တော်မြတ် (ဆွ) ၏ ကြင်ယာတော် (၂ပါး) နှင့်ပတ်သက်ပြီး မဖွယ်မရာ ၊မသင့်တော်သည့်စကားများရေးသား၍ကြင် ယာ တော်များ ၏ စာရိတ္တ နှင့်နွယ်ပြီး မသင့်တော်သည့် စွပ်စွဲမှုများ ပြုကြပါသည်။ ၎င်းတို့နှင့် စပ် လျဉ်း ပြီးလူကြီးမင်း၏ ဖသ်ဝါ ကို သိပါရစေ ခင်ဗျား ?
ဤကဲ့သို့သော် ပုတ်ခပ်စော်ကားမှုများကြောင့်အစ္စလာမ်မီဖေရ်ကာများအားလုံးနှင့် မဇ်ဟဗ် အဟ်လေ့ဘိုက် (အ.စ) အကြား အပြင်းအထန်း မတည်ငြိမ်မှုများ၊ စိုးရိမ်ရမှုများ ၊မလုံခြုံမှုများ ၊စိတ်ဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖိစီးခံရမှုများနှင့်ရင်ဆိုင်နေရကြောင်းလူကြီးမင်းအသိပင်၊ဖုံးဖိထားစရာ ပင်မလိုပါ ခင်ဗျား …
ဖြေ။။အဟ်လေ့စွန္နတ်ညီနောင်များအလေးအမြတ်ထားသည့်အရာများကိုစော်ကားခြင်း၊ပုတ် ခတ်ခြင်းသည်ဟရမ်ဖြစ်ချေသည်။ကိုယ်တော်မြတ်(ဆွ)၏ကြင်ယာတော်များကိုစွပ်စွဲခြင်းသည်အလွန် တရာ ကြီး မားလေးလံသည် အပြစ်ဖြစ်ပေသည်။ ဤကဲ့သို့သော်လုပ်ရပ်သည်တမန်တော်မြတ်များ(အ.စ) အားလုံး ၏ကြင်ယာတော်များ အထူးသဖြင့် ကိုယ်တော်မြတ် (ဆွ) ၏ ကြင်ယာတောမျာ်း အတွက် တားမြစ်ထားချေသည်။
အမေး ။ ဆဒ်ကာ နှင့်ပတ်သက်သည့် အဟ်ကမ်လေး သိပါရစေခင်ဗျား?
အဖြေ ။ ဆဒ်ကာ နှင့်ပတ်သက်သည့် အဟ်ကမ်လေး မှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည် ။
(၁) ဆဒ်ကာပေးလျှင် နီယသ်သည် မြတ်အလ္လာဟ် တစ်ပါးတည်းအတွက်တည်းအတွက်သာဖြစ်ရမည်။ (ဆိုလိုသည်မှာ မည်သည့် ပြစားမှုမျှမပါရ ။ )
ညွန်း - သဟ်ရီးရွလ်ဝစီလာ(အေမာမ်ခိုမေနီး (ရ.ဟ) အတွဲ ၂ ၊စာမျက်နှာ ၉၀
(၂) ဆဒ်ကာကို ပြန်ယူခွင့်မရှိချေ။
( ၃) ဆဒ်ကာ ဆရက်ဒ် ကို လည်းပေးနိုင်သည်။ သို့သော် ဆရက်ဒ် မဟုတ်သူ၏ ဇကာသ် သည် ဆရက်ဒ် အတွက်ဟရမ် ဖြစ်ချေသည်။
ညွန်း - သဟ်ရီးရွလ်ဝစီလာ(အေမာမ်ခိုမေနီး (ရ.ဟ) အတွဲ ၂ ၊စာမျက်နှာ ၉၁
( ၄ ) တမန်တော်မြတ်ကြီး (ဆွ) ကို မကောင်းမပြောသည့်အပြင် မွတ်စလင်များနှင့် စစ်မ တိုက်နေသူ ကာဖေရ် ကို ဆဒ်ကာပေးနိုင်ပါသည်။
( ၅ ) ဆဒ်ကာကို လှိူ့ဝှက်စွာ ပေးသင့်သည်။ သူတစ်ပါးအား အားပေး၊အားမြှောက် ပြုသည့် သည်အနေဖြင့်လည်း အတိအလင်း ပေးနိုင်သည်။ သို့သော် ဇကာသ် ကို အတိအလင်း ပေးရ လေမည်။
ညွန်း - သဟ်ရီးရွလ်ဝစီလာ (အေမာမ်ခိုမေနီး (ရ.ဟ) အတွဲ ၂ ၊စာမျက်နှာ ၉၁
(၆) တောင်းစားခြင်းနှင့်တောင်းစားသူကိုမပေးကမ်းခြင်း(မြန်မာလိုကန်တော့(သို့)မအ်ဖ်လုပ်ပါ) ဆိုပြီး ပြန်လွတ်ခြင်းသည် မက်ရူ ဖြစ်ပေသည်။
အမေး ။ Salaaam......MSM.. ဘာသာရေးအဆောက်အအုံတွင်းကျင်းပသောအခန်းအနားများ(eg..Majalis,Milard,Mawlood) တွင်ဘာသာရေးနှင်.မဆိုင်သောတခြားသူတယောက်အားပုပ်ခက်ပြောဆိုခွင်.ရှိ.ပါသလား?မိသားစုသားရေးသမီးရေး ရှင်းလင်းပွဲပုံစံပြုလုပ်ခွင်.ရှိပါသလား?
အဖြေ ။ ။ အကယ်၍ သာသာနာနှင့်သက်ဆိုင်နေပြီး အများအတွက် အကျိုး ရှိမည်၊ ရက်ကွက်အတွက် ၊ နိုင်ငံ အတွက် အကျိုး ရှိမည် ၊ ဆိုလျှင် ပြဿနာ မဟုတ်ချေ။ ဤကဲ့သို့ မဟုတ်ပါက ခွင့်မရှိချေ။
ဖြေပေးသည့်ရက် ၁၂၊ ၅၊ ၂၀၁၃ အီရန်ဒေသစံတော်ချိန် ၅း၅၇(ညနေခင်း)
အမေး ။ စလာမ်...
နဂျာဗေ မိုဟမ္မဒ် ဗင် အဘီ ဗက်ရ် လုပ်ကြံခံ ရသည် သတင်း ဂျနာဗေ အာအေရှာ ထံရောက်ပြီး နောက် ကိုယ်တော်(ဆွ) ၏ကြင်ယာတော် အနေဖြင့် အလွန်တရာ နေမရထိုင်မရ ဝမ်းနည်းပြီး နမာဇ်တိုင်း ကိုနူးဒ်ဖတ်တိုင်း (ဒိုအာတောင်းတိုင်း) မိုအာဝေယာ နှင့် အမရ်ဗင်အာ(စ်) တို့အပေါ် လာအ်နတ် ပို့ သည်ဆိုသည်မှာ မှန်ပါသလား ဟုတ်ပါသလား ?
ဖြေ ။ ။ ဟုတ်မှန်ပါသည်။ ဤအကြောင်းအရာ ကို လေ့လာနိုင်သည့်ကျမ်းကိုးများမှာ အောက်ပါ အတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။
၁။သာရီခ်ခေသွဗ်ဗရီ အတွဲ ၆ စာမျက်နှာ ၆၀ ၂။ ကာမေလ် အေဗ်နေ အစီးရ် အတွဲ ၃ စာမျက်နှာ ၁၅၅ ၃။ သာရီခ် အေဗ်နေ ကစီးရ် အတွဲ ၇ စာမျက်နှာ ၃၁၄ ၄။ ရှရ်ဟေ နဲဟ်ဂျိုဗလာဂါ ကျမ်း အေဗ်နေအဗ်အဘီ အလ် ဟဒီးဒ် အတွဲ ၂ စာမျက်နှာ ၃၃
နာမဟ်ရမ် အဖွားကြီးများ နှင့် လက်ဆွဲ နှုတ်ဆက်ခွင့် ရှိပါသလား?
ဖြေ ။ ။ အကယ်၍ တဏှာ စိတ် (အရသခံလိုသည့်စိတ်) မပါလျှင် အကြောင်း မဟုတ်ချေ။
ဟဇရတ်(သ)အာယာသွလ္လာဟ်အလ်အွဇ်မာ ဗဲဟ်ဂျက်(သ) (ရ.ဟ) ၊ ၎င်း၏ သောင်ဇီးလ် ဟွလ်မဆာအေလ် ကျမ်း မစ်စအာလာအမှတ် ၁၉၄၃
ခွင့်မရှိချေ ။ (မပိုင်ချေ။)
ဟဇရတ်(သ)အာယာသွလ္လာဟ်အလ်အွဇ်မာ အေမာမ်ခိုမေနီ (ရ.ဟ) နှင့် အခြား အခြား မရ်ဂျာတော် များဖြစ်သည့် နူရီးဟမ်ဒါနီ ၊ ဖွာဇေလ်လန်ကရာနီ ၊ မကာရေမ် မိုရှီးရာဇီး
ကြည့် - အလ်အိုရ်ဝါသိုလ် ဝတ်စ်စကာ ကျမ်း အတွဲ ၂ နေကာအခန်း မစ်စအာလာအမှတ် ၃၅
သူငယ်ချင်း အဖြင့် နာမဟ်ရမ် ယောက်ကျား လေး နှင့် မိန်းကလေး တို့ သည် စာ (သို့) ဖုန်း ဖြင့် တစ်ဦး နှင့် တစ်ဦး အပြန် အလှန် ဆက်သွယ်ခွင့် ရှိပါသလား?
ဖြေ ။ ။ အကယ်၍ အရသခံလိုသည့် ရည်ရွယ်ချက် ရှိမည် ၊ပြီးနောက် ကာမ စိတ်ကို ညွတ်ကိုင်းစေ မည် ဆိုလျှင် မပိုင်ချေ။ (ခွင့်မရှိချေ။)
ဟဇရတ်အာယာသွလ္လာဟ်အလ်အွဇ်မာ ဆရက် အလီ ခါမေနာအီ
ဟဇရတ်(သ)အာယာသွလ္လာဟ်အလ်အွဇ်မာဆရက်အလီ စစ်သာနီ နှင့် ဟဇရတ် အာယာသွလ်လ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာအလ်ဟဂ်ျနာစေရ်မကာရေမ်မိုရှီး
ကြည့် - ဟွဂ်ျဂျသွလ် အစ္စလာမ် ဆရက် မော်(အ)စင်မဟ်မူဒီ ၏ မဆာအေလေ ဂျဒီးဒ် ကျမ်း၊ အတွဲ (၅) ၊ စာမျက်နှာ ၅၃ ၊၅၄
ကျွန်တော် လူကြီးမင်း ၏ မိုကလစ် ဖြစ်ပါသည်။ အခြားမရ်ဂျာများ၏ ရှရီအီ အဖြေများ ကို အသုံးပြုလိုရပါသလား? လိုက်နာကျင့်သုံးဖို့ရန်ကော် အရေးကြီးပါသလား? ဖြေကြားပေးပါ။
ဖြေ ။ ။ မိုကလစ်တိုင်း မိမိ၏ မရ်ဂျာများ၏ ဖသ်ဝါ အတိုင်း ကျင့်ဆောင်ရပေမည်။ မိမိ၏ မရ်ဂျာ အနေ ဖြင့် မဆ်အာလာ တစ်ခု၏ ဖသ်ဝါ တွင် (အဟ်သေယာသ် သေ ဝါဂျစ် ) အဖြင့်မိန့်ထားသည်အခါ အခြား မရ်ဂျာများ ၏ ဖသ်ဝါကိုလည်း ကျင့်သုံး နိုင်ပေသည်။
မေးလ်ဖြင့်ဖြေ ဟဇရတ်အာယာသွလ္လာဟ်အလ်အွဇ်မာ ဆရက် အလီ ခါမေနာအီရုံး၊ကွမ်း (၂၀၊၃၊၂၀၁၃)
ယခုအခါတွင် တစ်ဝမ်းကွဲ ညီအကို မောင်နှမများ နီကာ ပြုနေကြသည်။
တ၇ားတော် အရ ခွင့်ပြုထားပါသလား။
မည်သည့် သွေးသားအဆင့်ထိ နီကာပြုပိုင်သနည်း။
ဖြေ ။ ။ ခွင့်ရှိပါသည်။ မောင်လာအလီ (အ.စ) ၊ဘီဘီဖွာတေမာ (အ.စ) သည်လည်း မောင်နှမ တစ်ဝမ်းကွဲများ ဖြစ်ကြပါသည်။ သွေးသားဆွေမျိုးများတွင် ရှအီအတ်မှ မဟ်ရမ် ဟု သတ်မှတ် ပေးထားသူတိုင်း တရားဝင် လက်ထပ်နိုင်ပါသည်။
မိုင်ယသ် အိမ်တွင်ပူဆွေးမှုအနေဖြင့် သုံးရက် မီးမမွှေးမချက်ပြုတ်စေရန် ဆွေမျိုးမိတ်သင်္ဂဟများက စားသောက်ဖွယ်ရာများ ပို့ပေးရမည်ဆိုတာ အစ္စလာမ်မှာရှိပါသလား။
ဖြေ ။ ။ မိုက်ယတ်(သ) အိမ်တွင် မီးမွှေး၊ချက်ပြုတ်ခြင်းသည် မက်္ကရူး ဖြစ်ပါသည်။
ဖြေပေးသည့်ရက် ၂၆၊ ၂၊ ၂၀၁၃ အီရန်ဒေသစံတော်ချိန် ၅း၅၅(ညနေခင်း)
သေသူ၏ ၀ိဥာဉ်သည် ဒွန္နယာသို့ပြန်လာသည် ဟူသော အဆိုများသည် မှန်ကန်ပါသလား။
ဖြေ ။ ။ အစ္စလာမ် ဘာသာအရ လူသားသည် အသက်ထွက်သည့်နှင့် ကေယာမတ်နေ့တိုင်အောင် အာလမ်မေဗရ်ဇတ်(ခ်)တွင် ခရီးဆက်ရမည် ဖြစ်သည့် အတွက် ဤ အဆိုများ မမှန်ချေ။
ဟွဂ်ျဂျသွလ်အစ္စလာမ် စအီးဒီ( အေရဖ်ဖန် နေ အစ္စလာမ်မီ)
မိုင်ယဒ် အပေါ်ပန်းတင်ခြင်း။ ထမ်းစင်ပေါ်ပန်းတင်ခြင်း၊ လွမ်းသူပန်းခွေချခြင်း ခွင့်ပြုထားပါသလား။
ဖြေ ။ ။ အကြောင်းမဟုတ်ချေ။
မိုင်ယဒ် ကဖန် ထုပ်ပြီးနောက်အနားတွင် ကျမ်းမြတ် ကုရ်အာန်ဖတ်ခြင်းကို ခွင့်ပြုထားပါသလား။
ဖြေ ။ ။ ရှိပါသည် ။ စဝါဗ်ရသည့်အလုပ်ပင် ဖြစ်ပါသည်။
ဆရက် အမျိုးသမီး နှင့် ဆရက် မဟုတ်သည့် အမျိုးသား နေကာ ပြုပိုင်ခွင့်ရှိပါသလား?
ဖြေ ။ ။ ဟုတ်ရှိပါသည်။ မည်သည့် ရှီအာ အေမာမ်မီယာ မွဂ်ျသဟစ် မှ မပြုရဟု ဖသ်ဝါ မပေးထားချေ။ သို့သော် ဟဇရတ် အာယာသွလ်လ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာလွတ်ဖ် ဖွလ်လ္လာဟ် ဆွာဖီ ဂိုလ်ဗိုင်ဂန်နီ အနေဖြင့် ဆရက် မဟုတ်သည့် အမျိုးသားသည် မိမိ၏ ဇနီးသည် ဆရက် အမျိုးသမီး အား အရမ်းအရိုအသေ၊လေးစား မှု ပြုပေးရမည်ဟု မိန့်ထားပါသည်။
မွတ်စလင်အမျိုးသား အနေဖြင့် မွတ်စလင်မဟုတ်သည့် အမျိုးသမီးနှင့် လက်ထပ်ပိုင်ခွင့်ရှိပါသလား ?
ဖြေ ။ ။ မွတ်စလင်မဟုတ်သည့် အမျိုးသမီးသည် ကာဖေရ် ဖြစ်လျှင် လုံးဝ မပိုင်ချေ။ အဟ်လေကေသာဗ် (ခရစ်ယာန်နှင့်ရဟူဒီ) ဖြစ်ပါက ယာယီနေကာ(မိုသာ) ဖတ်နိုင်ပေသည်။
ဟဇရတ်အာယာသွလ္လာဟ်အလ်အွဇ်မာဆရက်အလီ ခါမေနာအီ ၊ အေစ်သေဖ်သာအ်
မဟာတမန်တော်မြတ်ကြီး (ဆွ) ၏ စွန္နတ်တော်များအားလုံးသည့် ကျွန်တော်တို့အတွက် စံပြဖြစ်တော်မူ ကြောင်း ကျမ်းတော်မြတ် ကုရ်အာန်တွင် မိန့်တော်မူထားပါသနည်း ?
အဖြေ ။ ။ ဟုတ်ကဲ့ မိန့်တော်မူထားပါသည်။ စူရဟ် အဟ်ဇာဗ် စူရစ်အမှတ်တော် ၃၃ ၊ အာယတ်တော်အမှတ် ၂၁ ဖြစ်ပါသည်။
( 1 ) မီးဘာဖြစ်လို့ နှင်းတာလဲ
(2)sonat လက်မခံဘူးဆိုရင်ဘာကြောင့် katanat ဘာကြောင့်လုပ်ရတာလဲ
( 3) ဘာအတွက်ကြောင့် roazar တွေထား ရတာလဲ
( 4) မော်လာနာတွေ ဘာကြောင့် ခြေမျက်စိ အုတ်ပြီးတော့ဝတ်ရတာလဲ
(5) နာမားဇ် တွေဘာကြောင့် ပေါင်းဖတ်ရတာလဲ eg: (မဂ်ရ် နဲ့ အီရှာရ်)
( 1 ) မီးနှင်းတာနှင့်ပတ်သက်ပြီးသာသနာ့ အမေးအဖြေတွင် ဖြေထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။အချိန်ပေးပြီးရှာဖတ်ပေးပါ။
(2)sonat လက်မခံဘူး လို့ ဘယ်ရှီအာ ပညာရှင်က ပြောဖူးရေးဖူးပါသနည်း ?ရှီအာတွေ စွန္နတ်ကို လက်ခံ မခံဆိုတာ စာတတ်သူတိုင်းသိပါတယ်။ အကြောင်းက ရှီအာ ထိပ်တန်းအာလင်မ် ပညာရှင် ဟဇရတ် အာယာသွလ်လ္လာဟ် ဆရက် သဗါသဗါအီး (သဖ်စီမီးဇန် ကျမ်းရှင်) အနေဖြင့် ((စွန်နတ် နိုနဘီ (ဆွ) ဆိုသည့် ကျမ်းကို ပြုစုရေးသားထားပါတယ် ။ ဖွာရစီ ၊အူရ်သူ ဘာသာများဖြင့်လည်း ဘာသာပြန်ပြီးသွားပါပြီ။ အင်ရှာအလ္လာဟ် မြန်မာလိုလဲ ထွက်လာဖို့ ရှိပါတယ်။ဒါကြောင့် katanat ဘာကြောင့်လုပ်ရတာလဲ ဆိုသည့် မေးခွန်းဟာ အဓိပ္ပာယ်မဲ့ သွားပြီး ။
( 3) roazar ကို အလ္လာဟ် ဟို အရှင်မြတ်၏ အမိန့်ကြောင့်ထားပါတယ်။
( 4) ဘယ် မောင်လာနာတွေ ခြေမျက်စိ အုပ်ပြီး တော့ဝတ်တာလဲ? အတိအကျဖော်ပြပေးပါ။နောက် ခိုင်လုံသည့် ရှီအာကျမ်းမှ မဝတ်ရဘူး ၊ဝတ်ရမယ်ဆိုသည့် ဟဒီးစ်တော်အား ဖော်ပြပေး နိုင်ပါသလား?
(5) မဂ်ရ် နဲ့ အီရှာရ် နာမားဇ် တွေဘာကြောင့် ပေါင်းဖတ်ရတာလဲဆိုတော့ စွန္နတ် သေရစူလ်(ဆွ)ကြောင့်ပါ။
ဟုတ်မဟုတ်သေချာအောင် ဟဇရတ်အဗ်နေအာဘာစ်(ရ.သွေ့) ဆင့်ပြန်ထားသည့် ဘုခါရီကျမ်းပါအောက်ဖော်ပြပါ ဟဒီးစ်တော် တစ်ခု နှင့်ပင် လုံလောက်ပါသည်။
انّ النّبی صلّی الله علیه وسلّم بالمدینة سبعاً و ثمانیاً الظّهر و العصر و المغرب والعشاء ؛ فقال أیّوب :
لعلّه فی لیلةٍ مطیرةٍ ، قال : عسی
انظر : صحیح بخاری کتاب مواقیت الصلواة ج 1 ص 137 حدیث 543
ဟေဂျဗ်မ၀တ်ထားတဲ့ မုစ္စလင်မ် အမျိုးသမီးများရဲ့ ဓါတ်ပုံတွေကို ရှီအာ ၀က်ဘ်ဆိုက် တခုကဖေါ်ပြ ထားပါတယ်..
အဲဒီ့ ၀က်ဘ်ဆိုက် အုံနာနဲ့ ပါဝင်ကူညီနေသူ တွေဂိုနာရနိုင်ပါသလား?
အဖြေ ။ ။ ထိုအ မျိုးသမီးများသည် လူ(ရှီအာများ)သိနေသူများဖြစ်မည် (သို့) သိရန် အတွက် ဖော်ပြမည်ဆိုလျှင် ၎င်းတို့၏ ဓာတ်ပုံ အား ဟေဂျဗ် မပါဘဲ တင်ထားလျှင် ပြဿနာ ရှိပေ သည်။(ဂိုနာရပေမည်)
(တိုက်ရိုက်မိုဖိုင် ဖြင့် မေး ၁၀ ၊၁ ၊၂၀၁၃ ဒေသစံတော်ချိန် မနက် ၈ နာရီ ၄၅မိနစ် ခန့် )
ဟဇရတ်အာယာသွလ္လာဟ်အလ်အွဇ်မာဆရက်အလီ ခါမေနာအီ ရုံး ၊ကွမ်း
အိလ်မေကလမ်ရဲ့ အဓိပ္ပာယ်ကို ပြောပြပေးစေချင်ပါတယ်။
အဖြေ ။ ။ အိလ်မေ ကလမ်၏ အဓိပ္ပာယ် ဖွင့်ဆိုချက်အခွဲအလွဲရှိပေသည်။ သို့သော် တိုတိုတုတ်တုတ် သိထားရမည့်အချက်မှာ အလ္လာဟ်ဟို အရှင်မြတ် တည်ရှိမှု ၊ အရှင်၏ဂုဏ်တော်များ၊လုပ်ရပ်တော်များ ဆိုင်ရာ ကိစ္စ နှင့် သာသနာ ဆိုင်ရာ အကာယေသ် များ အကြောင်း ကို ရှင်းပြသည့် ပညာရပ်ကို ခေါ်ဆို ပါသည်။
အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်သခင်သည် အဘယ်ကြောင့် နမာဇ် ကို ကောင်းမှုအရာများအားလုံးကိုလက်ခံဖို့ အတွက် သော့ချက်အဖြင့် သတ်မှတ်ထားရပါသနည်း၊ ရှင်းသွားရန် ပမာပေး နိုင်ပါသနည်း?
အဖြေ ။ ။ စစ်မှန်သည့် ဟဒီးစ်တော်အရ အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်သခင်သည် နမာဇ် ကို ကောင်းမှုအရာများ အားလုံး ကိုလက်ခံဖို့ အတွက် သော့ချက်အဖြင့် သတ်မှတ်ထားပါသည်။ ဟဒီးစ်တော်အား ဝဆာအေလွရ်ှရှီအာ အတွဲ ၃ စာမျက်နှာ ၂၂ ဟဒီးစ်တော် အမှတ် ၁ တွင် လေ့ လာနိုင်ပါသည်။
ရှင်းသွားရန်ပမာပေးရမည်ဆိုလျှင်ကားမောင်းသမားအားယဉ်ထိန်းရဲများမှတရားဝင်ယဉ်မောင်းလိုင်စင် တောင်းခံလျှင် အိမ်ဂရံ ၊ ဘွဲ့လက်မှတ် ၊ အိမ်အရောင်းအဝယ် စာချုပ်၊မှတ်ပုံတင်၊ပတ်စပို့တ်စသည်ဖြင့် ပြလျှင်လက်ခံမည်မဟုတ်သကဲ့သို့အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်သခင်သည်လည်းတရားဝင်နမာဇ်ကိုကောင်းမှုအရာ များ အားလုံး ကိုလက်ခံဖို့ အတွက် သော့ချက်အဖြင့် သတ်မှတ်ထားရာ တရားဝင် နမာဇ် ကိုလက်မခံ မခြင်း အခြား ကောင်းမှု အရာများကို လက်ခံမည် မဟုတ်ချေ။
အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်သခင်သည် ကျွန်တော်တို့၏ အေဗာဒသ်လို အပ်ပါသလား ?
အဖြေ ။ ။ ကျမ်းတော်မြတ် ကုရ်အာန် စူရဟ် အီးဗရာဟီးမ် အာယတ်တော်အမှတ် ၈ တွင်မိန့်တော် မူထားသည်။အဓိပ္ပာယ်မှာ - ထိုပြင်ဟဇရတ်မူဆာ(အ.စ)အနေဖြင့်မိန့်ကြားသည်မှာ - အကယ်၍ အားလုံးသော လူသားများအနေဖြင့် ကာဖေရ် ဖြစ်သွားကြမည် ဆိုလျှင်လည်း အနည်းငယ် မျှပင် အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်အတွက် အကျိုးသက်ရောက်မည်မဟုတ်ချေ။အကြောင်းမှာ ဧကန်မလွဲ အရှင်မြတ်သည် လူသား အားလုံးထံ မှ လိုလားတောင့်တခြင်းကင်းမဲ့တော်မူသည့်အတွက် ဖြစ်ပေသည်။
အထက်ပါအာယတ်တော်အရ အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်သခင်သည် ကျွန်တော်တို့၏ အေဗာဒသ်မလို အပ်ချေ။ အေဗာဒသ် ပြုလျှင်ကျွန်တော်တို့အတွက်သာ အကျိုးရှိမည်ဖြစ်ပြီး ၊မလုပ်ပါက အကျိုးယုတ် မည်သာဖြစ်ပေသည်။
ရှီအာတွေက အလီ(ရ) နဲ့ မှားယွင်းပြီး တမန်တော်မိုဟ္မဒ်(ဆွ)အားနဗူးဝသ်ပေးခြင်းဟုယုံကြည်လက်ခံသူများဖြစ်ကြောင်း နင့် တမန်တော်မြတ်ထက် အလီသခင်ကိုသာ အမြတ်တနိုးဖြစ်ပြီး ကျန်ဆွဟာဗာ နှင့် ခလီဖရချေဒိန် ကိုလည်းမကောင်းပြောကြောင်းကြားသိရပါသည်။ဟုတ် မဟုတ် ပြန်ကြားပေးပါရန် ။ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
မေးမြန်းသူ - [email protected]
ရှီအာများ အနေဖြင့် ဟဇရတ်အလီ (အ.စ) နှင့် မဟာတမန်တော်မြတ်ကြီး (ဆွ)အား နဗူဝသ် မှားပေးဆိုသည် ယုံကြည်မှု ထားရှိသည်ဆို သည်မှာ လုံးဝမဟုတ်မကန်ပါ။
ရှီအာ ရန်သူများ ၏ လုပ်ကြံ မကောင်းဝါဒ ဖြန့် မှု သာ ဖြစ်ပါသည်။
ဟဇရတ်အလီ(အ.စ) ကို အမြတ်တနိုးထားတာတော့ လုံးဝ မှန်ပါတယ်။
တမန်တော်မြတ်ကြီး (ဆွ) ပြီးနောက် ကျန် ဆွာဟာဗာ များ ထက် ပိုပြီး
ကျန်မည်သည့် သာဝဝကတော်များ (အစစ်) ကို မကောင်း မပြော ၊လအ်နတ်မပို့ပါ။
ပြီးတော့ စစ်မှန်သည့်ရီဝါယတ်တော်များ ၊သမိုင်းများ ကို တင်ပြသည့်အခါ
သာဝသတော်များ ၊ခိုလာဖာ ကိုရှီအာများက မကောင်းပြောတယ် ၊ဘာညာ စသည့် သမုတ်ရင်တော့ မတတ်နိုင်ပါဘူး။ဒါဆိုရင်
စစ်မှန်သည့်ရီဝါယတ်တော်များ ၊သမိုင်းများ ကိုတင်ပြခဲ့ကြသည့် ၊တင်ပြနေသည့် အိုလမာ ၊အာလင်မ်များ ဟာ ရှီအာတွေ
ဖြေ ။ abna myanmar
ကြည့်ရန် - http://abna.ir/data.asp?lang=18&id=374908
ရှီအာများအမည်ဖြင့်လစဉ်ဘာ သာရေးစာစောင်ထုတ်ခြင်းနှင့်တစ်နှစ်တစ်ကြိမ်သွေးလှူဒါန်းခြင်း သည်မည်သည့်လုပ်ရပ်ကပို့ မွန်မြတ်ပါ သနည်း ?
အဖြေ ။ ။ လုပ်ရပ် နှစ်ခု စလုံးကောင်းမွန်ပါသည် ။ သို့သော် ရှီအာများ နှင့် မွတ်စလင်များအတွက် ပိုမိုပြီး အကျိုး အမြတ် ကို ဖြစ်ထွန်း စေသည့် လုပ်ရပ်က ပိုမိုပြီး မွန်မြတ်ပါသည်။ (စာစောင်သည် ရာနှင့်ချီပြီးရှီအာများထံရောက်နေပြီးဖတ်နေကြပါသည်။…)ဤအတွက်ကြောင့်စာစောင်ထုတ်ခြင်း သည် ပိုမိုပြီး မြင့်မြတ်ပါသည်။
(တိုက်ရိုက်မိုဖိုင် ဖြင့် မေး ၂၈ ၊၁၀ ၊၂၀၁၂ ဒေသစံတော်ချိန် မနက် ၉ နာရီ ခွဲ ခန့် )
အစ္စလာမ်မှာအေမာမ် ဟိုစိုင်း (န) (အ.စ) အတွက် ရည်စူးပြီး သွေးလိုအပ်နေသော ကာဖရ် လူနာ ဝေဒနာရှင်များအတွက် ကျတော်တို့ရှီအာတွေသွေးလှူဒါန်းခွင့်ရှိပါသလား?
အဖြေ ။ ။ ကာဖေရ် အနေဖြင့် မွတ်စလင်များ ၏ (အသက်၊စည်းစိမ် ၊သိက္ခာ .. ) အတွက် အန္တရာယ်မဖြစ်စေသူ ဆိုလျှင် အကြောင်းမဟုတ်ချေ။
မေး ။ ။ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား၊သူများအနေဖြင့် ပေါင်းပြီး အပျော်ခရီး ထွက်မည်ပြီးနောက် ၊အပျော်ခရီးစဉ်အတွက်ကစားနည်းများ( ဥပမာ ရေခဲများဖြင့် တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် ပစ်ပေါက်ကစားခြင်း စသည်ဖြင့် ) ကစားမည်၊ပြီးနောက်ဤလုပ်ရပ်ကိုလည်း ပိုင်သည်ဟု သတ်မှတ် ထားကြသည်။ ဤလုပ်ရပ်သည် ပြဿနာ ရှိပါသလား?
အဖြေ ။ ။ ဤလုပ်ရပ်သည် မပိုင်ချေ။
ဟဇရတ် အာယာသွလ်လ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာအလ်ဟဂ်ျနာစေရ်မကာရေမ်မိုရှီးရာဇီးရုံး ၊ကွမ်း၏အေစ်သေဖ်သာအ် မှ ကော်နှုတ်
မေး ။ ။ စွန်နီ ကောင်လေးများ နှင့် ရှီအာ ကောင်မလေးများ နေကာ ပြုခွင့်ရှိပါသလား? ရှီအာကောင်လေး အနေဖြင့် စွန်နီ ကောင်မလေး နှင့် နေကာ ပိုင်ပါသလား?
အဖြေ ။ ။ အကီဒါ(ရှီအာဖေရ်ကာ၏ သက်ဝင်ယုံကြည်မှုများ) လမ်းလွဲသွားဖို့ မစိုးရိမ်ရလျှင် အကြောင်းမဟုတ်ချေ။ စိုးရိမ်ရလျှင် မပိုင်ချေ။
မေး ။ ။ ဗလီတစ်လုံးမှာ ဝဇူလုပ်ပြီး အခြား ဗလီတစ်လုံးမှာ နမာဇ် သွားဖတ်ခွင့် ရှိပါသလား? အကယ်၍ တစ်ဦးတစ်ယောက် သည် ယနေ့အထိ ဤကဲ့သို့ပြုခဲ့မည် ဆိုလျှင် မည်သည့် တာဝန်ရှိပါ သနည်း ?
ဖြေ ။ ။ မပိုင်ချေ။ အနည်းဆုံး ဝဇူပြုထားသည့်ဗလီ တွင် ထိုင်ပြီး ကုရ်အာန် တမျက်နှာ ဖတ်ခြင်း၊ ၂ ရကတ်နမာဇ် ဖတ်ခြင်းကို ပြုသင့်ပေသည်။ အကယ်၍ တစ်ဦးတစ်ယောက် သည် ယနေ့အထိ ဤကဲ့သို့ပြုခဲ့မည် ဆိုလျှင်၎င်း၏နမာဇ်များ ပိုင်ပါသည်။ သို့သော် ရှေ့လျှောက်မဖြစ်ရန် ထိန်းရပေမည်။
မေး ။ ။ အင်တာနက်ဆိုင်ဖွင့်ထားပါသည်။ အင်တာနက်ထိုင်သူများသည် (ဟလ္လာဟ် ၊ဟရမ်) ကို အသုံးပြုကြပါသည်။မည်သည် အမိန့်ရှိ ပါသနည်း ?
ဖြေ ။ ။ အကယ်၍ ဟရမ်များ အသုံးမပြုရန် ထိန်းနိုင်လျှင်အကြာင်းမဟုတ်ချေ။(ဖွင့်စားလို့ ရပါသည်။)